2020 တိုကျို ၂၀၂၀ အိုလံပစ်အားကစားကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုနည်း | Androidsis
တိုကျို ၂၀၂၀ အိုလံပစ်အားကစားကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုနည်း
အာရုန်သည် Rivas | 15/07/2021 09:32 | NOTICIAS
အ ၂၀၂၀ အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲတိုကျို သူတို့ကအလှည့်အပြောင်းဖြစ်နေပြီ၊ ဒီအားကစားပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကမြင့်မားနေတယ်။ နောက်ပြီးရက်အနည်းငယ်လောက်မှာတော့ဂျပန်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားနဲ့အခမ်းအနားတွေအားလုံးပါ ၀ င်မှာပါ။
ထောင်နှင့်ချီသောအားကစားသမားများနှင့်အားကစားသမားများသည်နိုင်ငံများစွာကိုကိုယ်စားပြုကာအလံများကိုမြင့်မားစွာထားရှိမည်။ စပိန်တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အဆင်သင့်ရှိပြီးသား ဖြစ်၍ ယခုနှစ်တွင်ရလဒ်ကောင်းများမျှော်လင့်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်တိုကျို ၂၀၂၀ အိုလံပစ်အားကစားကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုလိုပါကဤနေရာတွင်မည်သို့မည်ပုံပြောမည်ကိုသင်ပြောပါမည်။
2 ထို့ကြောင့်တိုကျို ၂၀၂၀ အိုလံပစ်အားကစားကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်
3 တိုကျို ၂၀၂၀ အိုလံပစ်အားကြည့်ရှုရန်အခြားရွေးချယ်စရာများ
3.0.1 RTVE (စပိန်ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား)
4.1 စပိန်တွင်ပါ ၀ င်မည့်အားကစားနှင့်စည်းကမ်းများ
5 တိုကျို ၂၀၂၀ အိုလံပစ်တွင်မပါ ၀ င်သောစပိန်အားကစားသမားများ
6 အိုလံပစ်တွင်အားကစားအသစ် ၅ ခုထည့်သွင်းထားသည်
တိုကျိုအိုလံပစ်အားဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်မှသြဂုတ်လ ၉ ရက်အကြားနောက်ဆုံးရရှိခဲ့သည့်နှစ်၌ကျင်းပခဲ့သည်။ သို့သော်ကူးစက်ရောဂါကြောင့်စည်းရုံးရေးကော်မတီသည်ဤလှုပ်ရှားမှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပိုမိုကောင်းမွန်သောအခြေအနေများရှိနေသဖြင့်ယခုအထိရွှေ့ဆိုင်းရသည်။ အခုဒါတွေ သူတို့ကဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာစပြီးသြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့မှာအဆုံးသတ်မှာပါ။ ထိုကာလတစ်လျှောက်လုံးတွင်အားကစားနှင့်အားကစားပြိုင်ပွဲများဒါဇင်ပေါင်းများစွာရှိလိမ့်မည်။ စပိန်သည်အခြားသောနိုင်ငံများကဲ့သို့ပင်များစွာသောနေရာများတွင်ပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။
🥇 အခမဲ့လကိုကြိုးစားကြည့်ပါအိုလံပစ်ကနေဘာမှမလွတ်ပါနဲ့ ဒီမှာနှိပ်ပါ။ သင်သည်မည်သည့်ကတိက ၀ တ်မှမရှိပဲစစ်ဆေးမှုအားလုံးနှင့်အထူးသီးသန့်အားကစားများစွာ (F1, ဘတ်စကက်ဘော၊ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ) ကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
ဟုတ်တယ်၊ ဖြစ်ရပ်သည်ယခင်ဖြစ်ရပ်များတွင်ကဲ့သို့ပရိသတ်ကိုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါCOVID-19 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြproblemsနာများသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိပြီးသားကာကွယ်ဆေးများနှင့်ရောဂါကူးစက်မှုကိုသိသိသာသာလျှော့ချပေးသောအခြားအချက်များကြောင့်၎င်းတို့သည်လျော့နည်းသွားသော်လည်းအချက်အလက်များရှိနေသေးသော်လည်းပြသနေသောအရာ။
ထို့ကြောင့်တိုကျို ၂၀၂၀ အိုလံပစ်အားကစားကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်
တိုကျို ၂၀၂၀ တိုကျိုအိုလံပစ်ကိုကြည့်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်အများစုကိုပေးဆပ်ရသည်မှာမှန်ပါသည်။ အလွန်နည်းပါးပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည်။
အကောင်းဆုံးရွေးစရာကတော့ DAZN မှတဆင့်ဖြစ်သည် အမြဲတမ်းမရှိဘဲအခမဲ့စမ်းသပ်လကိုပေးထားပါတယ်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအလွယ်တကူဖျက်သိမ်းနိုင်သည်ငွေပေးချေခြင်းမှရှောင်ရှားရန်အလို့ငှာ။
ဒီမှတဆင့်ဖြစ်ရပ်ထုတ်လွှင့်ပါလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအခြားအားကစားနှင့်လိဂ်များကိုလည်းထုတ်လွှင့်သည်ထို့ကြောင့်အားကစား၊ အားကစားသမားများနှင့်တိုကျို ၂၀၂၀ အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပြင်အရေးအကြီးဆုံးလက်ဝှေ့တိုက်ပွဲများ၊ ဘောလုံးအသင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပျက်သမျှအရာအားလုံးအားအသိပေးရန်အမြဲကောင်းသည်။ del Rey, ပရီးမီးယားလိဂ်စသည်တို့), ဘတ်စကက်ဘောလိဂ်, မြောက်မြားစွာမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, အပတ်စဉ်ရှိုးများနှင့်ပိုပြီး။
ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများသည်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ သင်၏ credit သို့မဟုတ် debit ကဒ် Visa, MasterCard, JBC သို့မဟုတ် American Express ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ Paypal, Google Pay၊ Apple မှငွေပေးချေခြင်းသို့မဟုတ် DAZN လက်ဆောင်ကဒ်တစ်ခုကိုလည်းသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
လစဉ်ကြေးမှာယူရို ၉.၉၉ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် DAZN ကိုတစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်လိုပါကငွေပေးချေမှုကိုယူရို ၉၉.၉၉ ဖြင့် ရွေးချယ်၍ လစဉ်ငွေပေးချေမှုကိုယူရို ၈.၃၃ သို့ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်သည်။
တိုကျို ၂၀၂၀ အိုလံပစ်အားကြည့်ရှုရန်အခြားရွေးချယ်စရာများ
DAZN သည်တိုကျို ၂၀၂၀ အိုလံပစ်အားကစားကိုကြည့်ရှုရန်အကြိုက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအတော်အတန်ကောင်းမွန်သောအခြားသူများလည်းရှိသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင် RTVE (Spanish Radio Television) ရှိသည်။ အခမ်းအနားနှင့်ဤအိုလံပစ်တွင်ကျင်းပမည့်အားကစားများစွာကိုကြည့်ရှုရန်နိုင်ငံ၏အဓိကနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးဖွင့်ပွဲနှင့်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအပြင်အားကစား၊ စည်းကမ်းနှင့်အားကစားလှုပ်ရှားမှုများစွာပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။
Movistar သည်စပိန်အတွက်အားကစားပွဲများကိုအများဆုံးဖော်ပြသောမီဒီယာနောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒါကြောင့်ပဲ ဒါဟာအားကစားအဆင့်မှာဖြစ်ပျက်သမျှကိုကြည့်ဖို့နောက်ထပ်ကောင်းသော option တစ်ခုဖြစ်သည်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲများသာမကအခြားဘောလုံးပွဲများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘောလုံး၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘတ်စကက်ဘောအသင်းနှင့်အခြားအားကစားများတွင်လည်းပါ ၀ င်သည်။
Vodafone လည်းရှိသည်။ ဖောက်သည်များကို Eurosport Player ပေးသည် ၂၀၂၀ အိုလံပစ်အားကြည့်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေ။ ဤရွေးချယ်စရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းသောအရာမှာ၎င်းတွင် Eurosport 1 နှင့် Eurosport2ဖြစ်သောလိုင်းနှစ်ခုရှိသောကြောင့်သင်သည်မည်သည့်အားကစားပွဲတွင်မဆိုလက်လွတ်မခံဘဲစပိန်တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းကိုသာဆိုလိုသည်။
Olympics.com ပါ အိုလံပစ်ကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်အဓိကဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်သတင်းကနေသိချင်စိတ်တွေအထိ၊ တိုက်ရိုက်၊ တိုက်ရိုက်အားကစား။ ရုပ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့်အခြားများစွာတို့လည်းဤဝဘ်စာမျက်နှာတွင်ပြသထားသည်။ ဒါဟာအိုလံပစ်နောက်လိုက်ဖို့နောက်ထပ်ကောင်းသောအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထုတ်ဝေ၏။
🥇 အခမဲ့လကိုကြိုးစားကြည့်ပါ DAZN နှင့် 2021 တိုကျိုအိုလံပစ်မှဘာမှမလွတ်ပါနဲ့
ဒီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုနိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ကအားကစားစည်းမျဉ်း ၄၂ ခုရဲ့အဖြစ်အပျက် ၃၀၆ ခုမှာပါ ၀ င်မှာဖြစ်တယ်။ စပိန်သည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအားကစားသမားနှင့်အားကစားသမားစုစုပေါင်း ၃၂၁ ယောက်နှင့်အတူရှိနေမည်၁၈၄ ဦး မှာအမျိုးသားများဖြစ်ပြီး ၁၃၇ ဦး မှာအမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။ Saúl Craviotto သည်ကျွမ်းကျင်သောရေကူး Mireia Belmonte နှင့်အတူတိုကျို ၂၀၂၀ အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲတွင်တိုင်းပြည်အလံတင်ဆောင်သူဖြစ်လိမ့်မည်။
Saúl Craviotto နှင့် Mireia Belmonte တို့သည်အကောင်းဆုံးနှင့်အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးစပိန်အားကစားသမားများတွင်ပါဝင်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကပွဲမှာအလံကိုကိုယ်စားပြုဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ယခင်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင်ဆုတံဆိပ်များစွာရရှိခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကစပြီးတရုတ်နိုင်ငံဘေဂျင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲအားလုံးမှာပထမဆုံးပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Belmonte ၏အစိတ်အပိုင်းတွင်သူသည်အိုလံပစ်စာစောင်များတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်မပါဝင်ခဲ့ပါ။ ၎င်းသည်ရီယိုတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ လန်ဒန်နှင့် ၂၀၁၆ တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ဘရာဇီး။
စပိန်တွင်ပါ ၀ င်မည့်အားကစားနှင့်စည်းကမ်းများ
ဒီအခမ်းအနားရဲ့အားကစားပွဲတွေမှာပါ ၀ င်မယ့်စပိန်ရာပေါင်းများစွာကိုဖြန့်ဝေမှာပါ 29 အားကစားနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစည်းကမ်းများ၏ 35ရေကူး၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ဘတ်စကက်ဘော၊ ဘောလုံး၊ ဘောလုံး၊ ခြံစည်းရိုး၊ ကျွမ်းဘား၊ ခုန်ခြင်း၊
နိုင်ငံ၏အမည်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားမည့်ကိုယ်စားလှယ်များစွာတွင်Damián Quintero Capdevila နှင့် Sandra Sánchez Jaime (ကရာတေး)၊ arscar Husillos (အားကစားသမား)၊ Jon Rahm (ဂေါက်သီး)၊ ပါပလောအဘိုင်ယန် (ဘတ်ဒင်တန်)၊ Escobar (လက်ဝှေ့ထိုး)၊ Alberto GinésLópez (တောင်တက်ခြင်း)၊ David Valero Serrano နှင့် Jofre Cullell Estapé (စက်ဘီးစီးခြင်း), Albert Torres Barceló (လမ်းကြောင်း), Beatriz Ferrer-Salat (မြင်းစီးသူရဲ - ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်း) နှင့် Jessica Vall (ရေကူး) သည်အခြားအများအပြားအကြား။ အမည်များ
ရီယိုဒီဂျနေရိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှုတွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်စပိန်နိုင်ငံသည်ဆုတံဆိပ် ၁၆ ခုခန့်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီး ၄ င်းတို့အနက် ၇ ခုသည်ရွှေ၊ ငွေ ၄ ခုနှင့်ကြေးဝါ ၆ ခုတို့ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲတွင်ဆုတံဆိပ် ၁၇ ခုနှင့်နောက်တစ်ခုမှာဆုတံဆိပ် ၁၇ ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော်လည်းဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ရှိ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ထက်ပိုမိုအောင်မြင်သောနေ့တစ်နေ့ကိုပြည့်စုံစေသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အများစုကိုရွှေဖြင့်ပြုလုပ် ထား၍ ဖြစ်သည်။ ယူကေတွင် ၃ ရှိနေစဉ်ဖြစ်သည်။
ထိုနည်းတူစွာ, စပိန်သည်အမြဲတမ်းဆုတံဆိပ်အများဆုံးနှင့်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲတွင်ရလဒ်ကောင်းများရရှိသောနိုင်ငံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီထုတ်ဝေမှုဟာကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ မျှော်လင့်ချက်များသည်မြင့်မားပြီး၊ စာရင်းပြုစုသူကတိပြုထားသည့်အတိုင်းယခုနှစ်တွင်အိုလံပစ်တွင် (၂၂၂) ဆဆ (ဆုတံဆိပ် ၂၂ ခု) ရရှိသည့်နိုင်ငံ၏စံချိန်သည်ကျော်တက်နိုင်သည်။
တိုကျို ၂၀၂၀ အိုလံပစ်တွင်မပါ ၀ င်သောစပိန်အားကစားသမားများ
ကမ္ဘာ့အရေးအပါဆုံးအားကစားပြိုင်ပွဲများဖြစ်သည့်စပိန်နှင့်အခြားပါ ၀ င်သောနိုင်ငံများသည်ခက်ခဲသောစစ်ပွဲကိုတိုက်ခိုက်ရန်နှင့်အိုလံပစ်အားကစားကိုအောင်မြင်ရန်အကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်များအားခေါ်ယူလေ့ရှိသည်။ သို့သော် ယခုနှစ်တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ တိုကျို၊ ဂျပန်၌မရှိတော့သောစပိန်နိုင်ငံမှအားကစားသမားများနှင့်အားကစားသမားအများအပြားရှိသည်။
သူတို့ထဲကတချို့ဟာနောက်ခံလူများပါဝင်သည် Sergio RamosPSG အသင်းသည်ပြင်သစ်အသင်း PSG (Paris Saint Germain) ၏အသင်းဝင်ဖြစ်သည်။ သူကအိုလံပစ်ဘောလုံးအသင်းမှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းအတွက်ကစားသောFerrán Torres နှင့် Serie A (အီတလီဘောလုံးလိဂ်) တွင်ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်နှင့်ရိုးမားအသင်းအတွက်ကစားသော Brahim Díazနှင့် Borja Mayoral တို့လည်းအလားတူဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, စပိန်သည်စည်းချက်ကျွမ်းဘားအမျိုးအစားတွင်အရည်အချင်းပြည့်မီခြင်းမရှိခဲ့ပါ, ဒါကြောင့်Inés Bergua, Ana Arnau, Valeria Márquezနှင့်အခြားသူများကဲ့သို့သောဇာတ်ကောင်များကျန်ရစ်လိမ့်မည်။ ဤသည်အားကစားအတွက်တိုင်းပြည်မကျေနပ်ကြပါဝင်မှုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကရာတေးပြိုင်ပွဲတွင်ထူးချွန်သောမာရီယာတောရက်စ်သည်လည်းတိုကျိုသို့မသွားပါကံကောင်းထောက်မစွာ, စပိန်ကိုယ်စားအရည်အချင်းပြည့်မီဖို့စီမံခန့်ခွဲခဲ့သူစန်ဒရာSánchezနှင့်Damián Quintero နှင့်မတူဘဲ။
အိုလံပစ်တွင်အားကစားအသစ် ၅ ခုထည့်သွင်းထားသည်
အားကစားတက်ခြင်းနှင့်စကိတ်စီးခြင်း ယခုနှစ်တိုကျို ၂၀၂၀ အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲတွင်သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရလိမ့်မည်။ ဤအရာများသည်အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဤစာစောင်ကိုကြည့်ရှုရန်စိတ် ၀ င်စားသောပရိသတ်များဖြစ်လိမ့်မည်၊ အခြားလေးယောက်ထက်မပိုသောအားကစားတောင်တက်ခြင်း၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » တိုကျို ၂၀၂၀ အိုလံပစ်အားကစားကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုနည်း
Multi-device WhatsApp ကိုတကယ်လား? ငါတို့စစ်ဆေးတယ် !!
Android အတွက် Anime ဆွဲရန်အကောင်းဆုံး app များ